Kuraasta Ankaray Sideed u fikirtaa? | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraKuraasta Ankaray Sideed u fikirtaa?
26 / 12 / 2019 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Metro, TURKEY
sideed u malaynaysaa kuraasta ankaray
Kuraasta Ankaray Sideed u fikirtaa? Sababta oo ah tirada dadka rakaabka ah ee tareenka ku jira Degmadda Ankara ee Magaalo Weyn, Agaasinka Guud ee EGO, waxaa loo qorsheeyay in la sameeyo diyaarin kursi si loo helo gaadiid badan oo ballaadhan iyada oo lagu ballaarinayo aagga tareenka. Fikradahaagu waa inoo qiimeeyaan….
Si loo qaado sahamintayada Riix halkan
Ku saabsan Ankaray
Ankaray ayaa kamid ah wadooyinka tareenka dhulka hoostiisa mara ee Ankara. Dhererka xariiqda waa 9,5 kilomitir oo xitaa waxaa jira 11 saldhig.
Nidaamka tareenka ee ugu horreeya ee Ankara Ankaray, oo la bilaabay in la dhiso 7 Abriil 1992 si uu u daboolo baahida dhoofinta sii kordhaysa ee Ankara, ayaa la dhammaystiray Agoosto 30, 1996 waxaana loo adeegsaday dariiqa AŞTİ-Dikimevi. Furitaanka M2, saldhig wali lama xiriirin Söğütözü, oo dhismihiisa socdo.
Isbadal Turkey ee ka Transport Logistics Maxaad u malaynaysaa ee barnaamijka
Maxaad u malaynaysaa inay tahay joogsiga ugu badan ee Metrobus?
Waa maxay saldhigga cusub ee YHT?
Kulankii Isuduwidda ee DHMİ ee garoonka diyaaradaha Esenboğa